I-Limonaia: isakhiwo sembali, ukubukeka kwechibi, igadi ye-2 ha - I-Airbnb
I-Limonaia: isakhiwo sembali, ukubukeka kwechibi, igadi ye-2 ha
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguErika
I-Tettoia (99 sqm), indawo efihlakeleyo ngokupheleleyo, eyandisiweyo nexhotyisiweyo yesakhiwo ukususela ngenkulungwane ye-18, ekwiLimonaia yakudala (indlu eluhlaza ye-lemon) embindini wegadi yehektare eyi-2 (iilemoni, iiorenji, imithi yesundu, i-oleander. Bougainvileen kunye nokunye okuninzi).
Ukusuka eTettoia ungabona ichibi elibanzi, unxweme oluphambi kweenduli ezikufutshane zaseTuscany.
I-Gargnano kunye nechibi zihamba malunga nemizuzu eyi-8.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex, enefenitshala yakudala nefenitshala yale mihla, kwisakhiwo ukususela ngenkulungwane ye-18 kwindawo eorenji ebonakala ngokubanzi kwichibi kunye neenduli ezijikelezileyo.
IGargnano yindawo ekhethekileyo, ehlonitshwa ixesha, engachukumiswanga kakhulu kukhenketho lweendawo ezininzi, iziko le-Oberer Garda Lake Natural Park, elikwaxhotyiswe ziindwendwe zenkcubeko, ezemidlalo kunye nokupheka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gargnano